सांसद गगन थापा भन्नुहुन्छ : प्रधानमन्त्रीले कहिले धारा खोलेर, कहिले उठेर–बसेर उद्घा’टनको त’मासा गरे !
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलाई भएकोप्रति काठमाडौंबासीसँग माफी माग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्टै उ’द्घाटनको तमासा गरेको बताउनुभएको छ ।
विहीबार (आज) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंबासीलाई समयमा पानी खुवाउन ढिला ग¥यौं । यो आयोजनाबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि, हामीले पनि । सिक्नुपर्ने बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टी थापेर,
कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घा’टन गरेको छ । तमासा गरेको छ । च’मत्कार भयो भनेको छ ।’यस अगाडि उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई सडक र पुलको शि’लन्यास गर्न र उद्घा’टन गर्न भ्याई–नभ्याई भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनिराख्नुभएको छ, ‘यति धेरै विकासको काम कहिल्यै भएको छैन । यो त चमत्कार नै भयो ।’
उहाँले थप भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई यो चम’त्कार भएको किन लागिरहेको छ ? दुई वटा कारण हुनसक्छ । एउटा कारण वास्तविकता कुरा के छ ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन । चरम अ’ल्पज्ञान वा ढाँ’ट्ने बानी लागेको छ ।
वि’कृत अस’त्य भाषा । यी दुवै राष्ट्रको निम्ति हानि’कारक छ ।’उहाँले फेरि भन्नुभयो, ‘चैतको २९ गते २०७४ साल अर्थात् ५७ दिन पछाडि मेलम्चीको सुरुङ छि’चोलेर, सकेर उपराष्ट्रपतिले उ’द्घाटन गरेर, रिबन का’टेर ल’ड्डु बाँड्नु भयो र रो’स्टममा उभिएर भन्नुभयो, २०७५ सालको असोजसम्ममा मे’लम्चीको पानी आउँछ । साढे दुई वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि ।’
सोबीचमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा नमिलेको कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले थप भन्नुभयो, ‘मन्त्रीसँग कुरा मिलेन, ठे\_कदारसँग मोलमोलाई मिलेन । साढे दुई वर्ष लाग्यो । डेढ अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च भयो । ५७ दिनमा चमत्कार भएको थिएन । पहिलेदेखि काम भइरहेको थियो । त्यो ९ महिना त आयोजनाको कामको सिन्को भाँचिएको थिएन । अहिले य’त्रो फू’र्ति !’
२०४४ सालमा मे’लम्ची खानेपानी आयोजनाको प’रिकल्पना गरिएको कुरा उल्लेख गर्नै उहाँले भन्नुभयो, ‘२०५५ सालमा मे’लम्चीको बिकास समिति बनिसकेपछि पनि २३ वर्ष लाग्यो । ७-८ वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना २३ वर्ष लाग्दै गर्दा हामी सबै सरकारमा बस्यौं । ७ – ८ वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना २३ वर्ष लाग्दै गर्दा, अर्बौ रुपैयाँ बढी ख’र्च लाग्दै गर्दा हामीले मा’फी माग्नु पर्ने होइन !’
त्यस्तै, उहाँले २०६७ सालमा सुरु भएको तामाकोशी २०७३ सालमा सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘२०७१ सालको चभै’तसम्ममा ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो । भूकम्पको कारणले केही पछि हट्यो । नाकाब’न्दीको कारणले केही प्रभा’व ग¥यो ।
२०७७ चैत्र २९, आईतवार ०५:५५ गते 1 Minute 556 Views